स्वास्थ्य सचिव भन्छन्, ‘कामकाजमा आएनन भने मन्त्रालयले कडाभन्दा कडा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ’ - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ अन्तर्वार्ता / विचार ∕ स्वास्थ्य सचिव भन्छन्, ‘कामकाजमा आएनन भने मन्त्रालयले कडाभन्दा कडा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ’
स्वास्थ्य सचिव भन्छन्, ‘कामकाजमा आएनन भने मन्त्रालयले कडाभन्दा कडा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ’
हेल्थ आवाज आईतबार, २०७६ असार १ गते, १७:२० मा प्रकाशित
३१ जेठमा डडेल्धुरा अस्पतालमा शल्यक्रियाका क्रममा २५ वर्षीया गर्भवती महिला गीता ताम्राकारको मृत्यु भयो । त्यसपछि विरामीका आफन्तले चिकित्सकहरूले उपचारमा लापरवाही गरेको भन्दै प्रदर्शन र अस्पतालमा सामान्य तोडफोड समेत गरे । त्यसपछि डडेल्धुरा अस्पतालको अवस्था असामान्य बन्न पुग्यो । आइतबार दिउँसो डडेल्धुरा अस्पतालमा क्रियाशील ११ जना डाक्टरले असुरक्षा महसुस भएको भन्दैं सामूहिक विदामा बस्ने पत्र अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जितेन्द्र कँडेललाई बुझाए । त्यसलगतै केन्द्र मातहतमा रहेको उक्त अस्पताल अब कसरी चल्छ भनेर हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियासँग छोटो कुराकानी गरेका छौं ।
डडेल्धुरा अस्पतालमा ११ चिकित्सक सामूहिक विदामा बसेछन् । अब अस्पताल कसरी चल्छ ?
विदा सहुलियतको अधिकार हुदै होइन् र त्यस सम्बन्धमा मलाई सामूहिक बिदामा बस्नुभएको आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन् ।
उहाँहरूको सामूहिक बिदा बस्नेबारेको पत्र नै आएको छ नि ?
पत्र के हो त्यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मन्त्रालयमा पठाउन मैले अनुरोध गरेको छु । अनि, भानु न्यौपानेको संयोजकत्वको छानविन टोली गएको छ ।
कहिले गएको हो छानविन टोली ?
अहिले तपाईहरुसँग बोल्दाखेरि पुगिसक्यो । जसमा सदस्य डा. पुण्य पौडेल सदस्य र प्रदेश सरकारको तर्फबाट गोविन्द जोशी छानविन टोलीमा हुनुहुन्छ । कर्मचारीलाई आ—आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गर्न हामीले निर्देशन दिएका छौं । अब निर्देशनको विरुद्ध कर्मचारीले त्यसरी जोरजबरजस्ती गरेर सुरक्षालाई मात्रै बहाना बनाएर कामकाजमा आएनन भने मन्त्रालयले कडाभन्दा कडा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयले वास्ता गरेन भन्ने पनि छ नि ?
कस्तो वास्ता नगर्नु, घटना थाहा पाउने बितिकै म आफै हिजो नेपालगन्ज थिए मैले बैतडीबाट पोष्टमार्टम गर्न डाक्टरहरुलाई खटाएको छु । उहाँहरुले भनेकै मानेको छु । पोष्टमार्टम सम्पन्न भएको छ, लाश सदगद भइसकेको छ । अस्तिको घटनालाई लिएर उहाँहरुले मनोवैज्ञानिक रुपमा हामी त्रसित छु भन्नुभएको छ त्यो एकहदसम्म ठीक छ । सेवा नै अवरोध गर्नु उहाँहरुको पूरै गैरजिम्मेवार काम हो । त्यसमा मन्त्रालय गम्भीर छ । गम्भीर भएको हुनाले नै त्यहाँ छानविन टोली पठासकिएको छ । सेवा सुचारु राख्नलाई पनि तपाईहरुको अनलाइनमार्फत पनि मन्त्रालयले कर्मचारीलाई सूचित गराइदिनु अनुरोध गर्दछु । ्र
तस्वीरः स्वास्थ्य मन्त्रालयको बेवसाइटबाट